माग्नेले काखमा लिएको बच्चा किन सधैं निदाइरहेको हुन्छ ? — Imandarmedia.com
केही महिना अघि मैले भेटेको यो लेख कसले लेखेको हो स्पष्ट छैन । हामीले यसको आधिकारिकताबारे ब्याङकक र कम्बोडियामा रहेका हाम्रा अनुयायीहरूसँग बुझ्यौं। उनीहरुले हामीलाई ती माग्नेलाई खानेकुरा र पानी दिनु तर पैसा नदिनू भने। पैसा, त्यो पनि ठूलो नोट दिनाले माग्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्छ, त्यसैले तपाईहरू पनि यस कुरालाई मनन गरेर मात्र निर्णय गर्नुहोस्।
त्यो बाटो हिडेको एक महिनापछि एक दिन अचानक मेरो मनमा एउटा कुरा खड्क्यो, महिनाको हरेक दिन विभिन्न समयमा त्यो बाटो हिड्दा बच्चा उस्तै फाहोर थियो तर कहिल्यै रुदैनथ्यो वा चिच्याउँदैनथ्यो। ऊ जहिले पनि ‘आमा’ को घुँडा छेउ मुन्टो लुकाएर चुपचाप सुतिरहन्थ्यो। जसका घरमा बालबालिका छन् उहाँहरूलाई एक दुई वर्षका ससाना बच्चा कस्ता हुन्छन् थाहा नै छ। बच्चाहरू २–३ घण्टा सुत्छन् र उठेर रुन्छन् चिच्याउँछन् र फेरि सुत्छन्। यस्तो प्रक्रिया चलिरहन्छ । तर यो बच्चा एक महिनासम्म हर समय सुतिरहेको भेटिइन्थ्यो। मेरो शंका झन् बढ्दै गयो र एक दिन मैले सोधे, “यो बच्चा किन सधै सुतिरहन्छ ?”
ती माग्नेले नसुने झै गरिन् र घोसे मुन्टो लगाएर आफ्नो टाउको आफुले लगाएको ज्याकेटले छोपिन्। मैले फेरि आफ्नो प्रश्न दोहोर्याए, उनले टाउको उठाइन् र दिक्क लागेको भावसहित मेरो पछाडि कतै टाढा हेरिरहिन्।
भागी हाल यहाँबाट, अस्पष्ट फुस्फुसाहट निस्क्यो मुखबाट। बच्चा किन सुतिरहन्छ, म झण्डै चिच्याँए। पछाडिबाट एक बृद्ध मानिसले मेरो काँधमा हात राखेर भने, “तिमी उनबाट के चाहन्छौ देख्दैनौ उनको जीवन कति कठिन छ ?, हँ ?” यसो भन्दै उनले एक मुठी चानचुन पैसा माग्नेको थालमा हालिदिँए। माग्ने महिलाले आफ्ना हात आकाशतर्फ उचालिन् र सर्वकालिक पिडित र करुण अनुहार बनाइन्। वृद्धले मेरो कुमबाट हात हटाए र घरतर्फ लागें। मलाई पक्का विश्वास छ, उनले आफ्ना परिवारजनलाई आज मेट्रो स्टेशनमा आफूले कसरी एक अवला नारीको एक हृदयहिन मानिसबाट रक्षा गरे भनी सुनाउनेछन् ।
मैले चकित भएर सोधे, “के तिनीहरुलाई हेरोइन वा भोड्का दिइएको हुन्छ ? “हो त नि, त्यसैले त ती बच्चाहरु दिनभरी चिच्याउदैनन्” उसले भन्यो। दिनभरी बच्चा शान्त रहोस् भनेर बच्चालाई भोड्का वा कुनै नसालु पर्दाथ दिइन्छ। बच्चाको शरीरले त्यस्ता पदार्थ पचाउन सक्दैन र धेरै बच्चाहरू मर्छन्। अझ खराब त के छ भने कहिलेकहीं बच्चा दिनमै मर्छ र आमा बन्नेले दिनभरी उसलाई काखमा लिएर बस्छिन्। यो नियम नै हो। बटुवाहरूले थालमा केही पैसा हालिदिन्छन् र बिचरी एक्ली आमालाई सहयोग गरी पुण्य कमाइयो भन्ने ठान्दछन्।
उदार र करुणाका खानी भएका भद्रभलाद्मीहरु हो!माग्नेले सडकमा सुताइरहेका बच्चालाई करुणामय भएर हेर्नुको साटो त्यसका पछाडि लुकेको भयानक तस्विरलाई सम्झनुहोस्। auxx.me बाट साभार याे लेख नेपाल रिडर्सका लागि दामोदर उपाध्यायले भावानुवाद गर्नुभएकाे हाे।
उमेर केवल एउटा अंक मात्र हो । यो भनाई हालै एक ७१ वर्षीया मोडलले मोडलिङ मञ्चमा साबित गरेकी छन् । सारा ग्राण्ट नामकी यी मोडलले अष्ट्रेलियन फेसन विकमा आफ्नो रनवे डेब्यू गरिन् ।
बिहीबार आयोजित यो फेसन विकमा जब सारा स्विमसुटमा र्‍याम्पमा देखिइन् । सबैको नजर उनीतिरै मोडियो । उनले कालो स्कूप–नेक स्विमसुट लगाएकी थिइन् । स्विमसुट माथि फ्लोरल प्रिन्टेड ओवर सर्ट थियो।
सिड्नीको केरिजवक्समा भएको यो फेशन विकमा साराले उमेरसँग जोडिएका सबै भ्रमलाई तोडेर आफूलाई एक मिसाइलका रुपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
‘वृद्ध महिलाहरुका लागि एक परिपक्क व्यक्तिको जस्तै आउटफिट लगाउन मनलाग्छ । स्विमसुट लगाउनु मेरा लागि कुनै ठूलो समस्याको कुरा थिएन । किनकी ७० आजको नयाँ ५० सरह हो । हामी सबै स्वस्थ छौं । त्यहीकारण बढी समय बाचिरहेका छौं । तपाईंले एउटा मात्र शरीर पाउनुभएको छ । त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ । कुनै आकार, तौल र उमेर भन्दा पनि अरुलाई सशक्त बनाउन काम गर्नुपर्छ’, उनले भनेकी छन् ।
उनी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी मोडल बनेकी छन् । उनले १६ वर्षको उमेरमा आफ्नो पहिलो र्‍याम्पवक गरेकी थिइन् । यो र्‍याम्पवक साराले न्यूजिल्याण्डमा पाइरी कार्डिनका लागि गरेकी थिइन् ।
‘म एक ड्रेस रिहल्सल हेर्न गएको थिएँ । उनीहरुले मलाई कुनै पनि हालतमा शोमा सहभागिता जनाउने निर्णय लिए किनकी म अन्य युवतीभन्दा अग्ली थिएँ’, पहिलो मोडलिङ अनुभव उनले सम्झिएकी छन् ।
उनको चर्चा एंटीपोड्सदेखि यूरोप र अमेरिकासम्म छ । उनले पेरिस, इटली र लण्डनमा वोगका लागि मोडलिङ गरेकी छन् । अष्ट्रेलिया आउनुअघि सारो पेरिस, मिलान र लण्डनमा भेलेन्टिनो, कार्ल लेजरफेल्ड र जान्द्रा रोडेज जस्ता ब्राण्डका लागि क्याटवक गरिसकेकी छन् । ७० को दशकमा उनी प्लेब्वाय म्यागजिनको कभरमा पनि आइसकेकी छन् ।
एकै देशमा दुई राहदानी
विश्वमा केही यस्ता अनौठा नियम कानुन र जीवनशैली छन् जसका बारेमा थाहा पाएपछि हामी अचम्मित हुने गर्दछौ ।
१. दुई राहादानी
नेपालमा राहदानीले अधिकाशं सरकारी काम हुने गर्दछ । अझ घरेलू उडानकालागि त राहदानी चाहिदाँ पनि चाहिँदैन । भारत बाहेको विदेश जानु पर्याे भने मात्र यो चाहिन्छ । तर रूसमा भने घरेलू यात्रामा पनि राहदानी चाहिन्छ । रुसमा देशभित्र एउटा र बाहिर अर्काे राहदानी बोक्नुपर्ने नियम छ ।
२. सडकको नाम
नेपालमा लगभग सबै सडकको नाम छ । त्यो पनि अधिकाशं सडकको नाम व्यक्तिको नाममा छ । तर विदेशमा सडकको नाम व्यक्तिको नामबाट कमै राखिन्छ । कोस्टारिका नामक देशमा सडकको नाम नै छैन । त्यहा सिमा चिन्ह (ल्याण्डमार्क)को प्रयोग गरीन्छ ।
३. मास्कको प्रयोग
कोरोना भाइरसको महामारी आएपछि पुरै विश्वले मास्कको प्रयोग गर्न थालेको छ । तर विश्वमा केही यस्ता देश थिए जो यस अघि नै मास्कको प्रयोग गर्दथे । दक्षिण कोरीया यस्तो देश हो जहाँ रुखाखोकि लागेमा अरुको सुरक्षाकालागि मास्क लगाउने चलन छ ।
४. पढ्नै नसकिने ठाँउको नाम
विश्वमा केही यस्ता ठाँउ छन् जसको नाम सजिलै पढ्न सकिन्छ । तर एउटा यस्तो ठाँउ छ जसको नाम उच्चारण गर्न जो कोहिले सक्दैनन् । न्यूजल्याण्डमा यस्तै एक स्थान छ, जसको लामो नामका कारण यसलाई पढ्न सकिदैन । अंग्रेजीका ८५ अक्षर मिलेर बनेको यो स्थानको नाम पढ्ने कोशिस गर्नुस् त ।
५. कपडा सुकाउन घर बाहिर बासको डण्डा
हामी कहाँ कपडा सुकाउन घरको छत वा भुइमा टागेर सुकाउने गरिन्छ । यसकालागि जूट वा प्लास्टिकको डोरी वा तार बाध्ने गरीन्छ । तर सिंगापुरमा भने कपडा सुकाउन घर बाहिर बाँसको डण्डा राख्ने चलन छ ।
अपार्टमेन्टमा यौन धन्दा, डे बुकमा चर्चित ब्यापारीको नाम देखिएपछि हङ्गामा
पुरुषको वीर्यबारे रोचक ७ जानकारी, जुन तपाईले थाहाँ पाउदा राम्रो
अनलाइनबाट किनेको सामान जब भालुले चोरेर हिड्यो, हेर्नुहोस् भिडियो